25 Ways To Start a Business With No Money [Easy Step by Step Guides] - Sicko News
Ma waxaad dooneysaa inaad ganacsi bilowdo lacag la’aan? Waxaa laga yaabaa in dhabarkaagu ka soo hor jeedo gidaarka oo aad si ba’an ugu baahan tahay inaad bilowdo isugeyn dhanka dhinac ah.
Waa macquul inaad leedahay ikhtiyaarka dib ugu laabashada kulliyadda laakiin waxaad doorbideysaa inaad ganacsi gasho adigoo aan haysan shahaado la sameyn karo.
Waxaa laga yaabaa inaad tan hore maqashay laakiin sida muuqata, waxaa jira 1,000 qaab oo lagu sameeyo $ 1,000 xitaa haddii aad bilowdo ganacsi qiime jaban ah.
Ma ka fikirtay fikir badan nooca ganacsi ee aad jeceshahay inaad bilowdo? Waxaad ku bilaabi kartaa ganacsi adoo isticmaalaya fikradaha ganacsiga maalgashi hooseeya kaliya si aad u ogaato inaad necbayso waxaad sameyso.
Xaqiiqdii bilaabida meheraddu waxay u baahan tahay waqti badan, shaqo adag iyo ballanqaad si ay u noqoto mid guuleysata.
Runtu waxay tahay in ay suurtagal tahay in ganacsi lagu bilaabo lacag la’aan laakiin waxay ku qaadataa xoogaa hal abuur leh in arrintan laga saaro.
Si kastaba ha noqotee, waxay ku qaadaneysaa lacag ama lacag bilow ah inay meheraddu kusii socoto si ay u daboosho kharashka maalinba maalinta ka dambeeya sida tasiilaadka iyo gaadiidku waxay kuxirantahay nooca ganacsiga.
Aynu eegno liiskan dariiqooyinka si aad ganacsi ugu gasho naftaada adoo adeegsanaya hal abuurka iyo sidoo kale kheyraadka aad hadda haysatid.
Kahor intaadan bilaabin ganacsi waxaad u baahan doontaa waqti aad ku hubiso inaad maskax ahaan diyaar u tahay inaad saacado badan qaadatid 2-3-ka sano ee ugu horreysa si aad ganacsigaaga u guuleysato.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad faham wanaagsan ka hesho cidda aad tahay iyo sidoo kale waxa aad jeceshahay ee ku saabsan si aad u doorato ikhtiyaarka kugu habboon adiga.
Mar alla markii aad doorato ikhtiyaarka kugu habboon, samee qorshe ganacsi si aad uga hesho ganacsigaas bilow ilaa kor u qaad.
Waqti ku bixi khariidaynta wejiyada iyo waxa u baahan inay dhacaan si looga baxo hal mar ilaa kan xiga.
Maaha inaad la yaabto inaad soo qorto caawinta lataliye ganacsi, xarun ganacsi ama koorso ganacsi runtii waxay kaa caawin doontaa inaad guuleysato.
Liiska 25 Fikradaha Ganacsiga
Iyada oo aan lagala tashanin dib u dhac iyo dib u dhac halkan waa kuwan 25 dariiqo oo aad ganacsi uga bilaabi karto lacag yar amaba aan haysan.
Xaaladaha badankood, waxaad u baahan tahay oo dhan waa cinwaan emayl ah. Fikradahan ganacsi ee leh maalgashi hooseeya iyo macaash aad u sarreeya ayaa laga bilaabi karaa guriga.
Haddii aad leedahay karti gaar ah tusaale ahaan xagga jimicsiga, cuntada, rinjiyeynta ama tolidda waxaad noqon kartaa tababare macno ahaan habeennimo adigoo aasaaska u dhigaya ganacsi internetka ah.
Marka loo eego sahanka sahanka mushaharka, tababarayaal badan oo nololeed ayaa ah kuwo iskood u shaqaysta waxayna qaadi karaan lacag ka badan $ 300.00 saacaddii. Qaar ka mid ah tababarayaasha fulintu waxay si sahlan u dallaci karaan $ 500.00 saacaddii.
Waan ogahay ugu yaraan hal ganacsi halkaas oo nin ku tababbarayo dadka sida loo sameeyo gacan-ku-haynta waana ganacsi hal milyan oo doollar ah. Marka ka fikir xirfadaha aad horay u soo qabatay.
qorshe ganacsi oo blog ah oo dhexdhexaad ah oo daabacan
Qabso Qorshaha Ganacsiga Blog ee Lagu Daabici Karo
Iska yaree khaladaadka
Gaarista Yoolalka Dakhliga
Hagaaji natiijooyinka 5-10%
Kordhin natiijooyinka bartaada
WAXAAN RABBAHAY QORSHAHA ganacsiga
Si aad u bilowdo waxaad u baahan doontaa inaad go’aansato aaggaaga takhasuska oo aad dajiso astaantan khadka tooska ah boggaga Facebook iyo sidoo kale degel hal bog ah.
Joogitaanka khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee internetka, waxaa ugufiican in la sameeyo bog hal bog ah iyadoo la adeegsanayo magacaaga domain.
Waxaad u badan tahay inaad ka fekereyso inaadan awoodin magac domain ama marti gelinta hadda. Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal inaad iibiso shay gurigaaga ka mid ah oo ku siin doona lacagta looga baahan yahay magaca domain iyo martigalinta sannadka ugu horreeya.
Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo xayeysiiya adeegga tababarkaaga kooxda saxda ah ee ku taal Craigslist. Si aad u hesho caddayn dhakhso leh adeegga ugu soo bandhig qiime qiimo jaban macaamiishaada 5-ta ah ee ugu horeeya.
Meelaha kale ee aad xayeysiin kartid waa meelaha ay ka midka yihiin jimicsiga, kuliyadaha, sheekooyinka Facebook iyo xitaa sheekooyinka Instagram.
Mid ka mid ah qaababka ugu dhaqsaha badan ee loo helo macaamiisha ayaa ah iyadoo la siinayo caqabad 5-maalmood ah oo bilaash ah kooxda Facebook halkaas oo ay macaamiishaadu ku sii nagaan karaan markaa maalinta 5-aad u soo bandhigaan casriyeynta barnaamijka lacagta lagu siiyo.
2. La tashi
Tani waxay la mid tahay tababbarka laakiin waxay si gaar ah diiradda u saareysaa u adeegidda macaamiisha shirkadaha. Laga yaabee inaad xirfad u leedahay kuhadlida dadweynaha, xiriirinta bulshada, iibinta ama xitaa jabsiga macluumaadka.
Waxaad si sahlan uga bilaabi kartaa inaad ku xayeysiiso adeegyadaada LinkedIn adigoo isticmaalaya fiidiyow isla markaana muujinaya natiijooyinka aad ka heli karto macaamiisha.
La xiriir Rugta Ganacsiga ee deegaankaaga si aad ugu fidiso fasal bilaash ah mid ka mid ah aagaggaaga gaarka ah halkaasna waxaad ka dalban kartaa macaamiisha lacagta siisay ee ka soo qaybgashay koorsadaada bilaashka ah.
3. Caawiyaha Virtual
Hadaadan waligaa maqal ereygan kahor intuusan si fudud u macnaheedu tahay waxaad bixin kartaa xoghayn iyo adeegyo kale oo maamulka tooska ah ee internetka laga helo ee raaxada gurigaaga iyo ganacsiyada.
Haddii aad khibrad u leedahay Xoghayaha ama Caawiyaha Maamulka markaa tani waxay noqon doontaa kala guur fudud oo aad ku bilawdo.
Waxaad booqan kartaa goobo ay ka mid yihiin Fiverr, Upwork iyo Remote.io si aad uga hesho boosas badan oo furan doorka noocaas ah. Waxaad sidoo kale kala xiriiri kartaa macaamiisha suurtagalka ah ee LinkedIn.
Waa suurtagal in la isticmaalo qalab sida MeetLeonard.com si loogu beddelo xisaabtaada ‘LinkedIn.com’ ee bilaashka ah CRM.
La kulan Leonard – LinkedIn rajada laga qabo
Waxa tani kuu oggolaaneysa inaad sameyso waa inaad si nidaamsan dib u adeegsato
ka raadi rajooyinka adoo adeegsanaya codsiyada xiriirka ama adeegsiga fariinta.
La kulan Leonard – xadka codsashada xadka
Xirmooyinka bilowga ah ee bilaashka ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad dirto 25 farriin maalin kasta ama codsiyada isku xirnaanta 25 maalin kasta.
sawir waxaa leh Sarah Pflug
4. Qoraa madax-bannaan (Waxaan ka dhigay wax kabadan $ 1,000 qoraa ahaan)
Waxaan aaminsanahay in qorayaashu yihiin qaar dadka ugu nasiibka badan adduunka hadda si fudud maxaa yeelay ‘waxa ku jira waa boqornimo’ sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qorayaal badan.
Shuruudaha ugu caansan ee shirkadaha waa in dadku ay qoraan qoraalada maqaallada sida tan oo kale. Waxa kale oo jira shuruudo loogu talo galay qorayaasha cirfiidka ee buugaagta.
Waxaad ka heli kartaa doorarkan furan meelaha ay ka mid yihiin Fiverr, Upwork, Content Weyn, Zerys iyo goobo kale oo badan.
Waxa runtii kaa caawin kara inaad dib u bilowdo meheraddaada qorista waa inaad ku biirto kulanno qoraalo la mid ah naftaada, waxaad ka heli kartaa 11 ka mid ah halkan.
Baro waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad u sameyso $ 500.00 ama in kabadan qoraal kasta haddii aad go’aansato inaad wax u qorto ganacsiyada. Waa inaadan runtii aqbalin shaqo bixinaysa wax ka yar $ 0.15 boqolkiiba eraykiiba.
Halkan waxaa ah 10 meelood oo waaweyn oo laga helo shaqooyinka qorista ee iskood u shaqeysta ee bixiya qiime cadaalad ah qoraal kasta oo blog ah.
Baahida loo qabo fiidiyowyada ayaa si isa soo taraysa u sii kordheysa maalin kasta waana la imaanayaa baahida loo qabo qoraal-warbixino.
85% fiidiyowyada waxaa lagu isticmaalaa hab aamusnaan taas oo ah sababta baahi weyn loogu qabo qoraallada.
Dadka qoraya qoraallada waxaa la yiraahdaa transcribers waxaadna ka heli kartaa shaqooyinkaan shirkadaha Transcription.
Shirkadahaas waxaa ka mid ah; Rev.com, Transcribeme.com, Gotranscript.com, Accutranglobal.com, Castingwords.com, Dailytranscription.com, Speechpad.com iyo kuwa kale oo badan.
Laba shay oo runtii kaa caawin doona inaad kasbato wax badan ayaa ah nooc wanaagsan oo makarafooni ah iyo sidoo kale lugayl lug ah.
6. Tafatirka fiidiyaha
Tani waxaa laga yaabaa inaysan la yaabin laakiin maxaa yeelay baahi weyn ayaa loo qabaa fiidiyowga iyada oo aan la dhihin sidoo kale waxaa jira baahi sare oo loogu talagalay tifaftirayaasha fiidiyowga.
Ma waxaad tahay fiidiyo fiidiyow ah? Haddii ay sidaas tahay markaa xirxiro gacmahaaga oo isku diyaari si aad xirfaddaada ugula soo baxdo fiidiyowyada.
Ziprecruiter.com, Runtii, Nomad shaqeynaya iyo kuwa kale oo badan ayaa ah meelo fiican oo laga helo macaamiisha tafatirka fiidiyowga.
Abuur hal bog hal bog oo bilaash ah oo leh Wix ama madal kale oo bilaash ah oo muujinaya faylalka oo ah waxa aad samayn karto.
Isu qor Fiverr.com iyo Shaqada kor ku xusan oo muujineysa boortofodarka naqshadaada.
U gudub dhanka Craigslist oo tag qaybta hal-abuurka hoosta ‘aaladaha’. Fiiri waxa dadka kale ku deeqayaan oo go’aanso waxa aad ku bixin karto taas mid aan caadi ahayn.
La imoow cinwaan muhiim ah iyo sharraxaad. Gali dhammaan faahfaahintaada iyo sidoo kale tusaalooyinka shaqadaada.
U samee koonto AcuityScheduling.com si aad ugu dari kartid xiriirkan jawaab celintaada macaamiisha suurtagalka ah ee u oggolaaneysa inay si fudud ugu qortaan la-tashi bilaash ah.
U gudbi xirxirada ganacsiyada maxalliga ah ee deegaankaaga.
Waxa kale oo aad Jeceshahay 25 Meelood oo Riix si Aad Walxahaaga Wax Ugu Jarto Khadka Tooska ah oo Lacag U Dhig
7. Naqshadeynta Sawirka
Mid ka mid ah doorarka baahiyaha ugu caansan ee xilligan waa Naqshadeeyayaasha Sawirrada. Sababta tan loo sameeyay ayaa ah in shey kasta oo walxaha ka kooban ay had iyo jeer u baahan yihiin inay la socdaan sawirro.
Sawirro ayaa looga baahan yahay si ay u xajiyeyaasha dhageystayaashu ugu hawl galaan dhammaan baloogyada, warbaahinta bulshada iyo xitaa mashiinka raadinta Google.
Haddii aad leedahay kartidaan waxaad tirisaa naftaada mid nasiib laba ama saddex jeer. Waxay u badan tahay caqli gal inaad sameysato degelkaaga internetka si aad u soo bandhigto shaqadaada kadibna aad ula xiriirto macaamiisha.
Abuur bog hal-bog oo bilaash ah oo leh Wix.com ama madal kale oo bilaash ah oo muujinaya faylalka oo ah waxa aad samayn karto.
U gudub dhanka Craigslist oo tag qaybta hal-abuurka hoosta ‘aaladaha’. Fiiri waxa dadka kale ku deeqayaan oo go’aanso waxa aad ku deeqi karto mid aan caadi ahayn.
sariirta jiifka-qolka jiifka-barkinta-barkinta
sawir waxaa leh Matthew Henry
8. Kireyn qol (Waxaan ka badan $ 2,500 aniga oo isticmaalaya ikhtiyaarkan)
Waxaad fiirin kartaa dhamaan talooyinkii hore waxaadna dareemi kartaa rajo xumo maxaa yeelay waxaad moodeysaa inaadan hibo haysan. Waa macquul in aad leedahay awood aad qof uga dhigto guriga.
Sida ugu wanaagsan ee loo adeegsado kartidaada soo-dhowaynta halkii aad qol uga kireysan lahayd gurigaaga. Ku dhawaad ​​qof walba wuxuu leeyahay qol firaaq ah oo la heli karo ama xitaa guri dabaq ah.
Xitaa waad la degi kartaa waalidkaa a
25 Ways To Start a Business 25 Ways To Start a Business With No Money business ideas business ideas with no money small business ideas To Start a Business With No Money Ways To Start a Business With No Money